Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ယခုအခါ၎င်းသည် Honor9နှင့် Honor 8 Pro တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည် Androidsis
Android Oreo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ယခုသည် Honor9နှင့် Honor 8 Pro တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည်
Terminal အသုံးပြုသူများအတွက်နို ၀ င်ဘာလသည်အလွန်ကောင်းသောသတင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည် Galaxy S8, Galaxy S8 + y LG က V30ထုတ်လုပ်သူများက beta အဆင့်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက Android Oreo သည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည့်ပထမဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Huawei ၏ဒုတိယကုန်အမှတ်တံဆိပ် Honor က၎င်းသည် Android Oreo ၏ပထမ ဦး ဆုံး beta ကိုစတင်ထုတ်လုပ်သည့်ကလပ်အသင်းများနှင့်လည်းပူးပေါင်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များအားပျော်ရွှင်စေလိုသည့်တစ်ခုတည်းသောသူများမဟုတ်ခဲ့ပုံရသည်။ ဤအခါသမယတွင် Honor သည် Androoid Oreo ၏ပထမဆုံး beta ကိုအသုံးပြုသူများအားမော်ဒယ်များအတွက်ထုတ်ပေးသည် ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သော terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် Honor 9နှင့်ဂုဏ်ပြု 8 Pro ကို။
Honor9၏ firmware ဗားရှင်းမှာ STF-AL10 8.0.0.315 (C00) ဖြစ်ပြီး Honor 8 Pro သည် DUK-AL20 8.0.0.315 (C00) ဖြစ်သည်။ အခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ဤ beta ကိုရောင်းချရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းရှိမရှိကိုကုမ္ပဏီကကြေငြာခြင်းမရှိသေးပေ သုံးစွဲသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်များကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့် Huawei ၏ဒုတိယကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောဒုတိယကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ကြသောလက်ရှိဖောက်သည်များကသုံးစွဲသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်များကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်အမြန်ဆုံးမြန်မြန် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောစျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားလျှင်သို့မဟုတ် တရားဝင်ငြူစူရန်အနည်းငယ်သာ။
Huawei သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုကတိက ၀ တ်ပြုထားသည် နှင့်သူသည်မိမိကတိတော်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်ပုံရသည်။ Android Oreo ကိုဖြန့်ချိပြီးမကြာမီတွင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အင်အားအကောင်းဆုံး terminal အများစုသည်နှစ်ကုန်မတိုင်မီသက်ဆိုင်ရာ update ကိုရရှိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော် Honor9နှင့် Honor 8 Pro တို့သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်ဒုတိယ Huawei အမှတ်တံဆိပ်၏တစ်ခုတည်းသောဆိပ်ကမ်းများမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Honor 6X သည်လည်းဤစာရင်းထဲတွင်ပါဝင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » Android Oreo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ယခုသည် Honor9နှင့် Honor 8 Pro တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည်
ခရစ် morones ဟုသူကပြောသည်
စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်တာ… Samsung အတွက် Oreo ကကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်အတွက်ပဲ။ ထိုအခါစောင့်ဆိုင်းစောင့်ရှောက်ရန်အခြားသူများ ... ????
Chris Morones အားပြန်ပြောပါ
Play Store သို့ရောက်ရှိမည့်သတင်းများအားလုံး
အချို့သော Google Pixel2XL များသည် Android ကိုမတပ်ဆင်ပဲရောက်လာသည်